Ahoana ny maha-zava-dehibe ny Internet ho an'ny mozika? - Semalt Expert ahiahy
Ho an'ny orinasa an-tserasera, ny fametrahana ny fitohizan'ny mpanjifa an-tserasera dia ny hevitra fototra ao ambadiky ny famoronana vohikala iray. Amin'ny alàlan'ny Search Engine Optimization (SEO), ny orinasa iray dia afaka miantoka fanatrehana matanjaka sy manintona amin'ny aterineto. Ny sary marika dia mety hahatratra olona marobe satria ny orinasa dia mahazo mpanjohy marobe. Vokatr'izany, tranonkala marobe no mifantoka amin'ny fisainana ambony amin'ny milina fikarohana amin'ny teny miavaka sasany amin'ny sainy. Ny fahombiazan'ity dingana ity dia azo atao amin'ny alalan'ny SEO - como montar um home studio fotografico en. Tafiditra ao anatin'izany ny endrika tahaka ny fikarohana lalindalina, ny famerenana mivantana sy ny media sosialy
Hatramin'ny volana Janoary 2017 dia niova tsikelikely ny SEO. Ohatra, ankoatra ny teny fanalahidy, Google dia mifantoka amin'ny maha-zava-dehibe ny votoatiny, ny fahatsaram-panahin'ny fandefasana ny endriky ny famolavolana, ny lanjan'ny votoatin'ny tranonkala ary ny endri-tsoratry ny web. Ho an'ny iray mba hahatonga ny algorithm SERP hifanaraka amin'izy ireo, dia tokony hifantoka fotsiny amin'ny traikefa amin'ny mpampiasa izy mandritra ny fivoriana. Ny fihetseham-po sy ny fahatsapan'ny olona iray rehefa tsindrio ny rohy dia misy fiantraikany amin'ny fanapahan-keviny raha hividy ny tranokalanao na handao ny valin'ny fikarohana hafa. Noho izany, ny fametrahana tranonkala manaraka ny endri-tsoratry ny tranonkala tsara dia tsy maintsy manana marketing ho amin'ny aterineto.
Ho an'ny olona iray manana lisansa tsara, ny Customer Success Manager Manager Semalt , Digital Services, Alexander Peresunko, dia nanoro hevitra ireto singa manaraka ireto:
Ny tranonkala iray dia tokony hahomby amin'ny fampiratiana sy fampiantranoana azy. Ny tranonkala tsara dia tokony tsy manana olana sy bibikely..Ny fonosana fampiantranoana dia tokony hanana bandwidth azo ampiasaina mba hahazoana valiny tsara sy haingana. Tamin'ny volana janoary tamin'ity taona ity, Google dia nitaky ny tranonkala ho mpitaingina finday ho azy ireo ho laharana amin'ny pejy SERP.
Marika tsy hay hadinoina
SEO dia mamorona marika matanjaka. Google dia manolotra ny lanjan'ny votoaty amin'ny alàlan'ny fanoroana Ny famaritana ny teny sy ny famaritana ny votoatinao dia mamaritra mafy ny toerana izay ho voaro ao amin'ny SERPs. Ny zavatra rehetra apetrahanao dia maneho ny marika izay ezahanao atao virosy.
Ny singa ao amin'ny tranokala iray dia ny tanjon'ny fampiroboroboana amin'ny Internet. Google dia manolotra ny hevitry ny mpampiasa amin'ny alalan'ireo tranga toy izany. Tokony halaim-panahy ny olona rehefa mitsidika ny tranokalanao izy ireo. Ny singa hita maso dia mampitombo ny fivoarana amin'ny alàlan'ny famadihana ireo mpitsidika ho mpividy. Ny famolavolana dia tokony hanome fotoana ho an'ny mpitsidika anao ary hitarika azy ireo amin'ny alalan'ny fividianana na famandrihana.
Ny fandefasana votoaty sy bokotra manokana toy ny Call-To-Action dia manampy betsaka amin'ny fivarotana anao. Ny fanamorana ny navigation dia manampy amin'ny fomba ahitan'ny mpanjifa ny zavatra tadiaviny. Ny mpanjifa dia tsy tokony hanana fotoana henjana na hizaha olana rehetra rehefa mandeha.
Toy ny mpandraharaha iray, ny fampivoarana ny tranonkala dia mety hanana fiantraikany amin'ny teknolojia ara-barotra marobe toy ny SEO. Ny fanentanana haingam-pahaizana aesthetic iray mpitsidika iray ao amin'ny tranonkalanao dia misy fiantraikany goavana amin'ny hoe tsy hividy na hividy ny tranokalan'ny tranonkala izy ireo. Ho an'ny teny filamatra manokana, ny fahatsaram-poana amin'ny finday, ary ny valin'ny tranokala, dia manome lanjany ny Google rehefa manome ny tranonkala. Ny vokatr'izany dia zava-dehibe ho an'ny mpandraharaha rehetra maniry ny hiditra ao amin'ny sehatra an-tserasera mba handinika ny bitika ara-teknolojian'ny fampiroboroboana amin'ny Internet. Ny tranonkala tsara dia manana ny tanjaky ny fiheverana avo lenta sy ny fifaninanana amin'ny sehatra manokana.